Tatitra momba ny fiovam-po 2014: Manome mari-tsoratra ary manatsara ny fiovam-ponao | Martech Zone
Tatitra momba ny fiovam-po 2014: Manome mari-tsoratra ary manatsara ny fiovanao endrika
Zoma, Jona 20, 2014 Zoma, Jona 20, 2014 Douglas Karr
Izahay dia mpinamana sy mpankafy (ary mpiara-miasa) Formstack hatramin'ny nanombohan'ity boky ity. Betsaka ny fahalalana ao amin'ny orinasa ary manohy miahy ny mpanjifany izy ireo ary mamokatra vokatra tsara ho azy ireo. Vao avy namoaka fikarohana mahavariana vitsivitsy ry zareo raha nikaroka sy nanadihady ny fanovana ny mpanjifa maherin'ny 400,000 sy ny fandefasana endrika an-tapitrisany.
Raha mila tsipiriany feno, sintomyFormstack 's Tatitra momba ny fiovam-po tamin'ny 2014. Ny tatitra dia fanangonana tahirin-kevitra izay misy fampahalalana momba izay mahatonga ny mpampiasa anao hameno ny endrikao. Manomboka amin'ny halavan'ny endrika mety indrindra ka hatramin'ny tsara indrindra manaiky bokotra bokotra hampiasaina, antenainay fa azonao atao ny mampiasa an'io data io mba hahatonga ny endrikao ho azo alefa araka izay azo atao ary hampiroborobo azy amin'ny toerana misy ny mpanjifanao sy ny mpitarika.
Teny manan-danja hampiasaina, fandrisihana hatolotra, tahan'ny fanovana eo ho eo, ny isan'ny fari-pahaizana, ary ny fampiasana sosialy sy finday dia misy fiantraikany amin'ny fahafahanao misambotra ny fiovam-ponao amin'ny endrikao. Ny orinasa sy ny mpanjifa dia rendrika amin'ny fangatahana fampahalalana, noho izany ny fahaizana manatsara ny endrikao dia manakiana mba hahafahanao manangona ny faharanitan-tsaina ilainao hanampiana ny mpanjifa na ny fiovam-po ilainao hitantanana ny orinasanao! Ity misy topy mason-tsivana sasantsasany hita ao amin'ny tatitra:
Tags: Tatitra momba ny fiovam-po tamin'ny 2014fampisehoana tsara indrindrateny bokotrafanavaozana fiovam-pofiovam-ponyniova foendrika sahafanolorana endrikatenyformstackbokotra fanoloranaendrika web
Hahomby ve ny hevitra momba ny atiny misy marika anao? Fomba 5 hahafantarana
Metrika 14 hifantohana amin'ny fampielezan-kevitra nomerika nomerika